Otu esi achọta Styles CSS a na-ejighi na gị Stylesheet | Martech Zone
Agbanyeghi na ichoro akwukwo gi, oge mbu mmadu biara ileta saiti gi nke nwere CSS nwere ike ime ka ebe nrụọrụ gi kwusi. Nke a adịchaghị oke maka echiche mbụ. Ka saịtị na-eto, ha na-agbasawanye na wijetị ọhụrụ na ihe ndị na-emepụta ihe na-aga n'ihu na-eme nke ọma na ọtụtụ usoro ejiji. Ka oge na-aga, mpempe akwụkwọ gị nwere ike ịgbanye ma bụrụ akụkụ dị mkpa ihe mere na saịtị gị na-eji nwayọ nwayọ karịa ndị ọzọ.
Ahụla m ngwaọrụ nyocha CSS ndị ọzọ na weebụ. Anyị ejirila Dị ọcha CSS iji belata nha faịlụ site na ịhazi ma debe data na ya. Mgbe ị na-eji ndị ọzọ iji nyochaa saịtị gị, ị ga-akpachara anya. Ọ bụrụ na ha kpochapu otu peeji ma nyochaa CSS gị, ngwá ọrụ ahụ nwere ike iwepu ibelata ụdị nke a na-eji na ibe ndị ọzọ.
Ọ bụghị ikpe na CSS anaghị eji ya - ngwá ọrụ na Andrew Baldock nke Mindjet, a uche nkewa ngwa, gosiri m ụnyaahụ. Ngwá ọrụ ahụ na-awagharị na saịtị gị wee chọpụta CSS anaghị eji ya. Nwere ike ịlele ụdị ịchọrọ ịdebe n'agbanyeghị nyocha ahụ. Iji bulie ya elu, ịnwere ike ibudata mpempe akwụkwọ mgbe ọ gafere obere usoro.